Matio 17: 1-27
Matio 16 Matio 17 Matio 18
Ary, indro, niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia, niresaka tamin'i Jesosy.
Ary Jesosy nankeo aminy, dia nanendry azy ka nanao hoe: Mitsangàna, fa aza matahotra.
Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: Ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Ento aty amiko izy.
Ary hoy Jesosy taminy: Noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manana finoana hoatra ny voan-tsinapy iray aza hianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: Mifindrà ery, dia hifindra izy; ary tsy hisy tsy ho hainareo hatao.
Kanefa iny karazany iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadian-kanina.
Ary nony tonga tao Kapernaomy izy, dia nankeo amin'i Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekelyva?
Dia hoy Petera: Mandoa ihany Izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe: Ahoana no hevitrao, ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fadintseranana sy vola hetra? Avy amin'ny zanany va, sa avy amin'ny olon-kafa?
Ary nony hoy Petera taminy: Avy amin'ny olon-kafa, dia hoy kosa Jesosy: Dia afaka ary ny zanaka.
Nefa andrao isika manafintohina azy, dia mankanesa ao amin'ny ranomasina hianao, ka manjonoa; ary raiso izay hazandrano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekelyeo hianao: dia raiso izany, ka omeo azy ho avy amiko sy hianao.